Dowladda federaalka oo diiday shir looga hadlayo qaxootiga Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka baaqsatay ka qeybgalka shir maanta oo talaado ah ka furmi lahaa magaalada Nairobi, loogana hadlayo dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkaas ku nool, sida ku cadeyd warqad ay qortay wasaaradda arrimaha debadda Soomaaliya oo warbaahintu heshay.
Shirkan oo ay isugu imaan lahaayeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, & Hay’dda UNHCR ayaa la sheegay in in DF Soomaaliya diiday ka qeyb galkiisa.
Wasaarada arimaha dibada Somalia, ayaa warqad ay soo saartay, waxaa ay ku sheegtay, ineey cabasho ka qabaan dadka laga raafayo dalka Kenya ee qaarkood dib loogu celiyay Muqdisho.
Warqadaan kasoo baxday wasaarada arimaha dibada Somalia, ayaa waxaa lagu sheegay, in qab qabshada lagu haayo Somalida Keny iyo Tarxiilkoodaba uu khilaafsanyhay Xeerarka Caalamiga ah ee Qaxootiga.
Dowladda Soomaaliya ayaa tilmaantay in hab-dhaqanka Kenya ee la xiriira qaxootiga Soomaalida sidoo kale khilaafsan yahy heshiiskii Chineva ee la saxiixay sanadkii 1951 iyo kii mMidowga Afrika ee la saxiixay 1969 iyo waliba heshiiskii 3 Geesoodka ahaa ee Kenya, Somalia iyo QM ay saxiixeen.
Warqada kasoo baxday wasarada arimaha dibada Somalia, ayaa sidoo kale lagu xusay, in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya aysan duruufahaas kor aan kusoo xusnay dartood aysan ka qeyb gali karin shir lagu qabanayo Nairobi oo looga hadlayo dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed.
Heshiis saddex geesood ah oo sanadkii hore dhexmaray, Soomaaliya, Kenay iyo hay’adda Qaxootiga UNCR ayaa dhigayay in gudi saddex geesood ah oo la sameeyay ay ka shaqeeyaan sidii dib loogu celin lahaa qaxootiga, taasoo ku timaada rabitaakooda, hase ahaatee waxaa Kenya iskeed u bilwoday in si xoog ah ku musaafurineyso qaxootiga Soomaaliyeed.
Shirkan saddex geesood ahaa ee manta ka furmi lahaa caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa dib u dhacay, kadib markii dowladda Soomaaliya diiday ka qeybgalkiisa.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii hore safiirkeedii u fadhiya Kenya Maxamed Calu Nuur Ameeriko ugu yeertay Muqdisho, si wada tashi ay ula yeelato, kadib markii Ciidamada Kenya ay xireen qunsulkii Safaarada Soomaaliya ee Nairobi Siyaad Maxamuud Shire, taasoo ka dhalatay caro weyn.
Danjirahaya ayaaa dhawaan dib ugu laabtay Nairobi, wuxuuna sheegay in dowladda Kenya cudurdaar ka bixisay xadgudubkii ciidankeedu u geystay dublamaasi Soomaali ah.